कलाकारिता क्षेत्र व्यावसायिक बनेको छः स्वस्तिका – Arthik Awaj
कलाकारिता क्षेत्र व्यावसायिक बनेको छः स्वस्तिका
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर २२ गते शनिबार ११:५१ मा प्रकाशित
स्वस्तिका लामिछाने, कलाकार
सानै उमेरमा कलाकारिता क्षेत्रमा लागेकी स्वस्तिका लामिछाने यतिबेला चर्चामा छन् । ब्रेक फेल टेलिसिरियलबाट चर्चामा आएकी लामिछाने म्युजिक भिडियोसँगै ठूला पर्दाका चलचित्रमा पनि अभिनय गरिसकेकी छन् । २०५२ वैशाखमा जन्मिएकी लामिछाने बिगत केही वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा जमेकी छन् । कलाकारिता क्षेत्रको आम्दानी, सम्भावना लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर लामिछानेसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानी
कहिलेदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नुभयो ?
कलाकारिता क्षेत्रमा म २०६९ सालदेखि आवद्ध छु । यसलाई निरन्तरता दिदै अहिलेको स्थानमा आइपुगेको हुँ ।
मैले स्टेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दथे । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गर्दै सिरियलहरको लागि अफर आउन थाले । मैले सबैभन्दा पहिला अभिनय गरेको सिरियल जिरेखुर्सानी हो । स्टेज कार्यक्रमबाट नै कलाकारिता क्षेत्रमा आवद्ध भएको हुँ ।
कलाकारिता क्षेत्रबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म कलाकारिता क्षेत्रबाट सन्तुष्ट छु । यो मेरो रुचीको क्षेत्र पनि हो । मैले दर्शक तथा फ्यानहरुबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । ब्रेक फेल सिरियलले पनि मलाई दर्शकको बिचमा चिनाएको छ ।
कलाकारिता क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
कलाकारिता क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ । पहिलाको तुलनामा अहिले कलाकारिता क्षेत्र धेरै राम्रो भएको छ । कलाकारिता क्षेत्र व्यावसायिक हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । कलाकाारिता क्षेत्रमा पनि सम्भावना धेरै छन् । यसलाई व्यावसायिक बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । स्क्रिप्ट लेख्ने, याक्टिङ गर्ने तथा निर्देशन गर्ने कुरामा सक्रिय भएर लागियो भने कलाकारिता क्षेत्रबाट पनि केही गर्न सकिन्छ । बाँच्न मात्र नभई यस क्षेत्रबाट नाम र दाम दुवै कमाउन सकिन्छ ।
कुन–कुन फिल्ममा अभियन गर्नुभएको छ ?
मैले गरेका अभिनयबाट नै दर्शकले मलाई चिन्नभएको हो । मैले २ वटा फिल्ममा फुल टाइम दिएर काम गरेँ । मैले अभिनय गरेको पहिलो फिल्म सुनपानी हो । लायन्स क्लबले बनाएको अभिजालोमा पनि मैले अभिनय गरेको छु । छक्कापञ्जा, वडा नम्बर ६, शत्रु गते, लगायतका फिल्ममा पनि मैले अभिनय गरेको छु ।
मोडलिङमा कत्तिको अफर आउँछ ?
मोडलिङको लागि पनि अफर आइरहेका छन् । म्युजिक भिडियोको लागि पनि अफर आएका छन् । गीत छनोट गरेर मात्र अभिनय गर्छु ।
फिल्म इन्डष्ट्रिमा केही गर्ने मेरो लक्ष्य छ । यससँगै याङ्करिङलाई अगाडि लैजानेछु ।
कलाकारितासँगै रुचीका क्षेत्रहरु के–के छन् ?
कलाकारितासँगै गीत गाउने पनि मेरो रुची हो । साथीहरुसँग घुम्न पनि मलाई रमाइलो लाग्छ । इलामको यात्रा अहिले सम्मकै सम्झन लायक छ । विदेशको यात्रामा थाइल्याण्को यात्रा अविष्मरणीय बनेको छ । थाइल्याण्डमा घुम्ने क्रममा समुन्द्रमा डुबेपछि मलाई उद्धार गरिएको हो । त्यो समय मरेर पनि बाँचे भन्ने लाग्छ ।
सञ्चार सहकारीको ब्राण्ड एम्बेस्डर बन्नुभएको छ । सहकारीसँग कसरी आबद्ध हुनुभयो ?
ककनी नुवाकोट जन्म घर भएपनि मेरो कर्मघर पोखरा हो । पोखराका युवा व्यवसायीहरु आबद्ध रहेको सञ्चार सहकारीले मलाई ब्राण्ड एम्वेस्डरमा अफर गरेपछि नस्वीकार्ने कुरै भएन । सहकारीको ब्राण्डिङका लागि मैले काम गरेकी छु ।
बढी बसाईं काठमाडौं कि पोखरा ?
बढी काम काठमाडौंमै हुन्छ । सुटिङका समयमा काठमाडौंमै बढी व्यस्त हुन्छु । घर पोखरा भएपछि यहाँ बस्ने क्रम पनि बढेको छ । पोखराको लायन्स क्लब अफ पोखरा भृकुटीसँग पनि आबद्ध छु । पोखराका लोकदोहोरी गायक प्रजापती पराजुलीको नयाँ गीतमा पनि अभिनय गरिसकेकी छु । अभिनयका लागि पोखरामा पनि अफर आउने क्रम बढेको छ । बसाईं काम र आवश्यकता अनुसार काठमाडौं र पोखरा दुवै ठाउँमा हुन्छ ।